Abshir Bukhaari “ 26ka Juun waxay bidhaan u aheyd gobanimadeynii iyo Israaca labada gobal” – Kalfadhi
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Senator Abshir Bukhaari ayaa xalay ka qaybgalay munaasabad loogu dabaal dagayo maalinta Xorriyadda Gobalada Waqooyi ee Soomaaliya.
Munaasaadda ayaa ka dhacday magaalada Cadaado ee Gobalka Galgaduud waxaana sidoo kale goob joog ahaa Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, sida Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen “Odawaa” Xildhibaan Saabir iyo mas’uuliyiin kale.
Khubad uu jeediyay Senator Abshir Bukhaar ayaa waxa uu kaga hadlay muhiimadda ay maanta oo kale u leedahay dhamaan Shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu soo jeediyay talo ku aadan sida looga bixi karo dhibaatada Soomaaliya heysata.
“26-ka Juun waxay Iftiin iyo Ileysa u aheyd gobanimadeynii iyo Israaca labada Gobal ee Waqooyi iyo Koonfur waana inaa xoojinaa Iftiinkaasi” ayuu Senator Abshir Bukhaar Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Aqalka Sare.
“Waxaan Farxadda la qeybsanayaa sidoo kalane aan Hambalyo u dirayaa dhamaan Shacabka Soomaaliyeed” ayuu yiri Abshir Bukhaari Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Aqalka Sare. “Waa maalin mudan in la xuso oo la is xasuusiyo” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Mr Bukhaar.
Senator Abshir Bukhaari Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Aqalka Sare oo ku sugan magaalada Cadaado ee Gobalka Galgaduud ayaa dhamaan madaxda Soomaaliya ugu baaqay in ay kawada qayb-qaataan Midnimada umadda Soomaaliyeed islamarkaana laga tanaasulo waxyaabaha aan danta guud ku dhisneen ee la isku heesto.
“In la is cafiyo lana ilaabi wixii dhib ah ee na soo maray islamarkaana la furo Page cusub ayaa ugu baaqayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed, madaxda Qarankana waxaa laga rabaa in ay wadadaasi ka shaqeeyaan” ayuu ka sheegay munaasabadii xalay lagu qabtay magaalada Cadaado Guddoomiye ku xigeenka Aqalka Sare Senator Abshir Bukhaari oo halkaasi u jooga dadaalo nabadeed.
Archives Select Month October 2021 (48) September 2021 (40) August 2021 (54) July 2021 (67) June 2021 (60) May 2021 (91) April 2021 (87) March 2021 (106) February 2021 (82) January 2021 (92) December 2020 (107) November 2020 (79) October 2020 (84) September 2020 (107) August 2020 (103) July 2020 (110) June 2020 (62) May 2020 (28) April 2020 (37) March 2020 (44) February 2020 (40) January 2020 (35) December 2019 (55) November 2019 (58) October 2019 (52) September 2019 (74) August 2019 (43) July 2019 (26) June 2019 (60) May 2019 (108) April 2019 (127) March 2019 (143) February 2019 (152) January 2019 (147) December 2018 (162) November 2018 (103) October 2018 (75) September 2018 (58) August 2018 (46) July 2018 (46) June 2018 (39) May 2018 (67) April 2018 (36) March 2018 (4) February 2018 (9) January 2018 (9) December 2017 (8) November 2017 (2) October 2017 (11) September 2017 (6)